Cheap CNC igwe carbon nchara akụkụ factory na suppliers | Ouzhan
N'ozuzu, ihe dị elu nke carbon carbon, nke ka ukwuu na-esikwu ike ma nwekwuo ike, ma ọ bụ obere plasticity. Carbon ígwè CNC egwe ọka nwere a dịgasị iche iche nke ngwa na adabara ọtụtụ n'ibu akụkụ. Ouzhan ga-eji aka ya hazie akụrụngwa dị ka ihe osise na ihe ndị ị chọrọ. Igwe ihe na-egwe nri na-adaba adaba maka ụdị ụdị ọrụ dịka akụkụ akụkụ na ngwaọrụ ndị na-agagharị agagharị. Curved akụkụ na n'ọtụtụ ebe, na ulo oru ubi, dị ka tobaim pupụtara, ụgbọ mmiri propellers, ulo oru ngwaahịa na cylindrical conical ebupụta, na na. N'ozuzu, a na-edozi igwe a na-egweri ya.
Carbon Steel CNC igwe-nkenke Carbon Steel igwe Parts machining Center
Uru nke Ouzhan carbon steel milled akụkụ
OEM ahaziri carbon ígwè-egwe ọka ọrụ-China Shanghai CNC carbon ígwè-egwe ọka akụkụ emeputa
Ouzhan bụ onye nrụpụta na - agbakwunye ụlọ ọrụ na azụmaahịa, na - enye ọrụ ndozi ntụgharị na igwe nhazi igwe. Dị ka ndị ahịa chọrọ, ọ nwere ike hazie carbon ígwè na mụ na a pụrụ ịdabere na elu-nkenke CNC-egwe ọka akụkụ. A na-arụpụta akụkụ igwe ndị a site na iji akụrụngwa kachasị mma, nke a na-enweta site na ndị na-ebubata ngwa ahịa a ma ama. Anyị ike na ọkachamara oru otu na oru oma management na ime ihe na usoro nwere ike hụ na zuru okè n'ichepụta nke carbon ígwè-egwe ọka igwe akụkụ. Ke adianade do, na CNC milled carbon ígwè ngwaahịa nyere erube nnọọ na àgwà ụkpụrụ na ike ga-eji dị iche iche ulo oru ngwa. Na anyị nwere ike inye mpi ọrụ maka carbon ígwè CNC-egwe ọka ngwaahịa na anyị kpọrọ ahịa.
Ouzhan carbon ígwè-egwe ọka akụkụ machining akụkụ iche
(1) Igwe igwe akụkụ
E gosipụtara njirimara nke akụkụ ụgbọ elu na ihu igwe nwere ike ịbụ nke kwekọrọ na ụgbọelu dị larịị, na-adabere n'akụkụ ụgbọelu ahụ, ma ọ bụ na-ele ya anya n'akụkụ ya; ọtụtụ akụkụ ndị e mere na igwe igwe igwe CNC bụ akụkụ ụgbọelu, akụkụ ụgbọelu ahụ bụ typedị akụkụ kachasị mfe na nhazi igwe milling n'ozuzu chọrọ naanị njikọ njikọ axis ma ọ bụ njikọ axis atọ nke igwe igwe axis atọ ka ọ bụrụ Hazie. N'oge usoro ọrụ ahụ, igwe a na-emegharị ahụ dị na kọntaktị na ngwongwo ahụ, a na-ejikwa igwe ma ọ bụ oke imi ehi.
(2) Igwe akụkụ akụkụ
Ihe e ji amata akụkụ akụkụ ya gbagọrọ agbagọ bụ na mpempe akwụkwọ akụrụngwa bụ oghere gbara gburugburu. N'oge nhazi ahụ, igwe a na-akpụzi ya na onye na-egwe ọka na-adị na kọntaktị mgbe niile. Egwuregwu na-ejikarị bọl na-eme ka elu gwụchaa.
Uru nke Ouzhan carbon steel milling service
- All nkenke CNC milled carbon ígwè ngwaahịa bụ isiokwu siri ike mma nnyocha.
- Site na eserese ma ọ bụ ihe nlele iji mepụta nkenke carbon steel milling.
Nke gara aga: OEM anaghị agba nchara CNC machining akụkụ maka uloanumaanu igwe akụkụ